मेरो बृद्धि सेटअपका लागि बिरूवाहरूको सहि संख्या के हो?
पूरक प्लान्ट ग्रोथ लाइट ग्रीन हाउस प्रकाश वातावरण नियमनको एक महत्वपूर्ण अंश हो।
मैले कसरी एलईडीको साथ भांग बढाए?
तल घर उत्पादकहरु मध्ये एक बाट बढ्दो डायरी छ। उनले लाइट अन टेक्नोलोजीद्वारा प्रदान गरिएको एलईडी ग्रो लाइटको पहिलो जेनरेशन प्रयोग गरे।